Tongasoa eto amin'ny Fikambanan'ny Ivotoerana Manoratra Iraisam-pirenena!
Ny Fikambanan'ny Ivotoerana Manoratra Iraisam-pirenena, a Filankevitra nasionalin'ny mpampianatra anglisy Affiliate, natsangana tamin'ny 1983. Ny IWCA dia mandrisika ny fampandrosoana ny talen'ny ivon-toerana an-tsoratra, ny mpampianatra ary ny mpiasa amin'ny alàlan'ny fanohanana zava-mitranga, boky, sy ireo asa matihanina hafa; amin'ny alàlan'ny famporisihana ny vatsim-pianarana mifandraika amin'ny sehatra mifandraika amin'ny ivon'ny fanoratana; ary amin'ny alàlan'ny fanomezana sehatra iraisampirenena ho an'ny ahiahy amin'ny foibe fanoratana.
Raha miasa amin'ny foibe fanoratana ianao na mianatra ivon-toerana fanoratana dia manantena izahay fa hiditra ao amin'ny IWCA ianao. Mpikambana mora ny sarany. Ny mpikambana dia afaka mangataka ny anay Grants, manatevin-daharana ny mifanitsy amin'ny mpanoro hevitra anay, manaova fanendrena ho an'ny anay mari-pankasitrahana, misoratra anarana ho an'ny hetsika nataontsika, manompo ao amin'ny solaitrabe IWCA, ary mandefasa amin'ny IWCA job board.
Ny IWCA dia tarihin'ny Birao IWCA ary manana fito ambin'ny folo vondrona mpiara-miasa. Raha vao mianatra amin'ny vatsim-pianarana manoratra sy miasa ianao dia aza hadino ny mitsidika ny anay loharanon-karena page.